Spoutable: Native Ads Yekuenda Vashanyi | Martech Zone
Kana iwe uri muparidzi, kuita mari yevateereri vako kunogara kuri kunetsa - kunyanya kana iwe uri pane saiti yeruzivo. Ratidza kushambadzira zvine mukurumbira pasi pehunyanzvi kana uchienzaniswa nedzimwe nzira dzekushambadzira, saka vaparidzi vanorasikirwa nekushambadzira kwakanyanya kunotsvaga pakutsvaga uye munharaunda. Kushambadzira kwevanhu yasvika senzira yekutyaira mari kune vaparidzi - asi ini ndakanyora zvisati zvaitika kuti inogona kuuya nemutengo kuvimbika kwechiratidzo.
Spoutable inogona kunge iine mhinduro yakanaka - uye isu tanga tichiiyedza pano chaipo Martech Zone. Pamwe pamwe neshambadziro dzinomhanya mukati mezviri mukati (izvo zvinogona kunge zviri icky), ivo vanopa iyo kubuda chinangwa mhinduro ndizvo zvakanaka. Kana mumwe munhu achigadzirira kusiya yako saiti, yakanaka pamusoro-kurara panera rinoratidzika iro rinopa dzimwe sarudzo kumushandisi. Pane yedu saiti, iyo pani inogadzira zvisere zvinyorwa zvakagadzirirwa kune vateereri vedu.
Spoutable inopa akawanda enedzimwe nzvimbo anoshanda zvese pane desktop uye nhare:
Ini ndinonyatsoda iyi mhinduro nekuti haisi kukanganisa mushandisi akabatanidzwa ari kunakidzwa nesaiti yedu. Inongoratidzwa chete kumushandisi anga achitobuda panzvimbo iyi. Vese vashambadzi nevaparidzi vanogona kucherechedza kwavo kushandisa mune chaiyo-nguva.
Kuzivisa: Isu tiri mubatanidzwa we Spoutable.
Tags: kubuda chinangwakubuda pamusoro-kuraranative adskushambadzira kwazvinopamusoro-kuraraspoutable
5 Inopa Vakavimbika Vatengi Vanoda Kubva Kwako Kutengesa uye Kushambadzira
Sep 25, 2017 na6: 04 PM
Ivo vane cpm inotyisa kwazvo yevashambadzi. Uye mazhinji ayo anoshandisa kushambadzira anovharidzira haamboone kubuda kwekushambadza zvakadaro.